Awunayo ukuba nam. kwiEksodus 17, abantu bakwaSirayeli ukuvavanya uThixo ngokwenza njengoko ke, ukuba uthembe. Emva kokuba yonke into Uyayazi kwenziwa kubo, eyenza abantu bakhe, ba khulula, ngokubonelela kubo njalo, ke nangoku musa uthembe. Ngoko ke ukulwa noMoses umxelele ukuba ndibanike amanzi ngoku. Bambuza kutheni wazisa entlango ukufa. Kwaye okunene ukubuza umbuzo, "Ngaba uYehova phakathi kwethu okanye?"
Nguwo ke lo hlobo kukukhalaza nxamnye noThixo olwenze esi sizukulwana. Fast phambili kuManani 14, kwakhona, phantse njenge irekhodi phinda kwaphulwa, ukuba kanye bekhalaza kwakhona besithi oko kuya kuba ngcono ukuba babuyele eYiputa. Abazange uthembe uThixo ukuba kubahlangula bagcine izithembiso zakhe.
Oku INdumiso kusikhumbuza zombini ezo namabali. Kwaye ezi ndinyana zibonisa ukuba impendulo kaThixo yokungabi kwabo kuYe.
Iminyaka yaba ngamashumi amane noburhalarhume seso sizukulwana; ndithe, "Ngabantu abantliziyo abalahlekana,abaziqondi iindlela zam. "Ngoko wathi ngesifungo ngomsindo wam, "Baya kungena naphakade ekuphumleni kwam."
Siza sixubushe iingongoma ezintathu ngokufutshane kule tekisi le ngokuhlwa.
Mamela kwakhona umbhalo. uThixo uthi, "Iminyaka emashumi mane Ndaba noburhalarhume sizukulwana…" Kulungile ndiyacinga ukuba uphendula lo mbuzo pretty ngokucacileyo. UThixo wenza nomsindo. Kwaye isono abantu bakhe ukuba kuphakamisa le umsindo. Kodwa andiqondi ukuba kufanele kubekho nayiphi akumangalisi apha ukuba isono sabo wenza uThixo wacaphuka. Oku yindlela asabela esonweni.
Sikhule up ukuba notata olungileyo, ngubani onothando ingqalelo kwaye saba nolwalamano kuhle. Kodwa andizange wayesazi ngokwenene uza yintoni mood ukuba. Ngoko ke ukuba itakane ababefuna ukufumana izinto uhambe iindawo, I uhlobo ndaziva ukuba ukudlala umdlalo. Phambi kokuba ecela into kuye, I uhlobo wazama Andilungi kuye size sibone ukuba uhlobo mood waba. "Indlela kokuphelelwa ezo cowboy, ubaba? iinwele zakho qinisekisa ibonakala entle. "Kwaye loo mibuzo ulungiso ziza kundinceda bana phandle ukuba xa ndimcela ngoku okanye emva. Kodwa iindlela zam ayengafezekanga. Ngoko ke, xa ndacela akunakuze ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba uya kusabela ngovuyo ("Ngokuqinisekileyo, unyana!") okanye umsindo ("Suka outta ubuso bam, unyana!"). Waba ongeke ngaloo ndlela.
Kulungile asifanele silindele ukuba olu hlobo Ukungaqiniseki kuThixo. UThixo isebenza ngeendlela ezingaziwayo. Ngoko uThixo ongeke ngeendlela ezininzi, kodwa akukho nto iyingozi malunga impendulo yakhe isono. Oku kudale umsindo wakhe. Wathembisa uAdam noEva, baza kufa ukuba bathobele Yena. Ngenxa yesono Wavula emhlabeni waphosa abantu ngalo ziye kwelabafileyo Numeri 15. Yaye iziganeko zikhankanywa kule Ndumiso, waphinda uThixo aphendule umsindo. Isono kudale ingqumbo kaThixo.
enyanisweni, i ibinzana nto eliguqulelwe Ndaba noburhalarhume sizukulwana, ngaphezulu ngokoqobo lithetha "Ndikruqukile sesi sizukulwana." Yiloo nto iinguqulelo ezininzi zithi. Emphakathini lo mfanekiso semidlalo. UThixo uyalucekisa aba bantu ngenxa yendlela abadla ziziphathe. Ngoko ukuba baphendule umbuzo wethu, UThixo abe nomsindo kwaye basabela isono sangaphambili nge ezishushu, ngcwele, semidlalo.
Ngoku ndiyazi oku kungenzeka, sisithethe nxamnye nengqiqo abanye abantu bakaThixo. bacinga, "Kulungile oko uThixo wam wena uthetha. UThixo wam asingeni nomsindo. UThixo wam soze bathi. "Kulungile, ukuze ube unelungelo. Mhlawumbi uThixo wakho bathi, kodwa uThixo weBhayibhile nje wenza apha kule embhalweni.
Ngoko ke kukho ingxaki apha? Njani ukuba ngokuphele-, ingcwele uThixo ngokungaguquki ukuphendula kunye umsindo ngumsindo kunye nolaka? Ukuba gqolo basabela umfazi wam nomsindo, wathi kuye, ukuba wayeza kuba sisono embi kum. ingqumbo kaThixo, nangona, ayikho enesono efana neyethu. Ku nga isiphako uphawu.
Njengoko I ukushumayela kule, Andiziva imfuneko othulula toe macala okanye uxolo ngokuba ingqumbo kaThixo. Kwaye kufuneka uzive imfuneko uxolo abahlobo bakho non-lamaKristu ngomsindo bakaThixo. Okanye ngesihogo. Kwaye musa ukuba ube neentloni ngayo umgwebo wakhe kwiTestamente eNdala ngathi imfihlo malunga ezidlulileyo kaThixo onesono avuza.
ingqumbo kaThixo akukho sono. Yeyona ndlela uThixo ongcwele aphendula ukuba wone. Yeyona impendulo engcwele kuphela imvukelo yokuba uMbuso evela abantu abenziwe ngomfanekiso wakhe. Musa ukuzama ukuzivumelanisa uThixo ukuba izinga lakho, Kuba umgangatho. umsindo yethu enesono, kuba bengaboni. Kodwa uThixo abe nguThixo oyingcwele ube nomsindo ngendlela yobulungisa kuphela.
Isono into kuphela akumkholisi uThixo. Kwaye isoloko akumkholisi uThixo. Kwaye zonke umoni uya kuziphendulela uThixo enomsindo, ngaphandle kokuba thile ingqumbo kaThixo ezijolise kuzo ingahoywa of.
isicelo: Maxa wambi, xa sisona, ukuba ucinga ukuba ucinga ukuba ayikho into embi. Ndiyazi phambi kokuba ndibe ngumKrestu, yaye maxa wambi emva koko, Andizange ndicinge yesono njenge deal enkulu. Kodwa zonke babecinga kuba mna kusa eminye imithetho. Mna zange ukuba yokuziphatha ngokwaneleyo. Kulungile isono ingaphezulu nje ukusilela yesimilo ngokwaneleyo. Kulityala ngokuchasene umntu - mntu uthembekileyo. Kwaye ke kukrakra loo mntu kwaye yenza nimqumbise. UThixo ukuthiyile akukho.
ke Mhlawumbi ayikwanelisi nakuba. Mhlawumbi ucinga uThixo ucaphuke. I mean ngokwenene Waba noburhalarhume iminyaka engamashumi amane? Izandi ngathi ubambe nenqala. Izandi uhlobo petty, uThixo. Kutheni na ukuba umenze mad kangaka? Kulungile Undikhuphayo ukuba aveze ezimbini.
II. Isono Ingaba An Indlela esisesinye
Jonga ivesi 10 kwakhona. UThixo sinika inkcazo kwesi sizukulwana Waba noburhalarhume. Uthi, "Ngabantu abantliziyo abalahlekana, abaziqondi iindlela zam. "
UThixo uthi belahleka ezintliziyweni zabo. Bona musa nje belahleka ngaphandle izenzo zabo. Kodwa ekubeni zabo, ngundoqo ukuba ngubani, belahleka.
I kwenzeka ukuba amanwele - I mean embi kakhulu - imiyalelo. Ngoko mhlawumbi qho ngeveki umfazi wam uya kuthumela ethile ukufumana into okanye siwisa into kwaye mhlawumbi ngomso, ndiwenze ngaphandle kokubiza okanye kuthatha kum ngokunjalo izihlandlo ezihlanu nje. Kwaye akukho kuba indlela zakhe ezimbi, kungenxa yokuba ndenza amathuba ephosakeleyo uze uhambe ngendlela engalunganga aze bajika.
Kulungile lo hlobo komfanekiso nto ipeyintiweyo apha xa uthi iintliziyo zabo zihenyuze. iintliziyo zabo ukuhamba phantsi indlela ephosakeleyo aze abakhokelele indawo engalunganga. ukuba Balahlekelwa. Kwaye ke Kunjalo ke zonke izono. Yonke isono ngaphezu nje yangaphandle, kwenzeka kuba iintliziyo zethu ukuya imiyalelo ephosakeleyo. Kwaye landela izenzo zethu.
Kwaye Ubuye athi, "Abayi iindlela zam." lemo kaThixo waba phezu uboniso ngokupheleleyo phambi kwabo - inceba yakhe nokwazisa ubungangamsha bakhe, etc. Kwaye Wabanika Uyalela ukuba ukulandela iindlela zakhe, ukuba ukulandela indlela yakhe. Kodwa kunokuba bakhetha ukulandela enye indlela. Nguye lowo uwanikele kuFaro ukwahlula uLwandle Olubomvu! Yinto Yayingakholeleki ukuba bakholose emva kokubona ukuba Yena. Babona imisebenzi yakhe, kodwa babengazi iindlela zakhe.
ngumKristu, wena uyazi ukuba le into oyenzayo xa wone? Ukuba wena nje kokuwa ihashe okanye ekuzeni elifutshane akho? Ukhetha i umendo enye ukuya lowo uThixo ubeke nina. Wena uthi, "uThixo, Ndikhe ndabona iindlela zakho yaye singafani nabo. Ndiyazazi ufuna njani ukuba aphile, kwaye ndicinga indlela yam engcono. Indifundisa ubulumko ngaphezu kwakho kunye neNkosi ngaphezu kwakho. Ndiza ukukhetha indlela yam. "Oku abangendawo. Yiyo ke le into esiyenzayo lonke ixesha sisona. isono sethu akukho ngaphezu isono ukukrokra koonyana, bengaqondi, sizukulwana singendawo kule tekisi.
Kufuneka ucinge luye isono sethu, okanye asiyi bayithiyayo ngathi kufanele. Yenza nantoni na ukuba isono senu ngokufanelekileyo. Yinto embi. Musa ukuzama ukuyenza mhle. Siza ungafuna ukutshintsha indlela sithetha ngayo. Sifanele ukucinga nje isono sethu njengo "Oh, Ndayeka ukulwa. okanye oh, Nditsala nzima oku. "Akukho sikhetha ukungamthobeli uThixo. bakhetha ukuba enze into engeyiyo oko uThixo usiyalele ukuba senze, kuba Andiyithandi into ke ukuba athi. Yiloo nto ke ubunyani ugly isono. Kwaye njengoko amakholwa abafuna ukwenza ukuthanda kukaThixo, siye lwa ukuba nembono elungeleleneyo kwi isono sethu.
Ralph Venning usinceda siqonde oko ku Ukona Isono xa uthi, "Kufuphi, lesono nabuganga yobulungisa kaThixo, ukudlwengulwa benceba yakhe, i jeer nomonde kwakhe, i okuncinane bamandla akhe, kukudelwa uthando lwakhe. Siqhubeke athi, nguwo upbraiding ukusekelwa yakhe, i ngenqindi phantsi ngesithembiso sakhe, ungcikivo ubulumko bakhe. "
I sesilumkiso umculi unika apha iqala ngala mazwi, "Musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu." Ngokusisiseko intsingiselo musa ziba nenkani kwaye ukwala imiyalelo kaThixo. Kwaye eso silumkiso usebenza kuthi ngokunjalo. Kungenxa yoko le nto umbhali wamaHebhere uchola eli candelo kwaye ilumkisa amaHebhere angaweli kude.
Xa ngenkani ukwala imiyalelo kaThixo, intliziyo kuwe esiba nzima ngokuba nzima phezu kwexesha. iintliziyo nzima ngenene ludla ngokwenzeka phezu kwiindibanisela elide, ukuba ubusuku. Sicinga ukuba asoze sibe uhlobo umntu kuphelela isono bengaguquki, kodwa asikwazanga. Ngokwenene iintliziyo nzima kwenzeke ngokuhamba kwexesha xa sikhetha ukungamthobeli uThixo zinto zincinane ngaphezulu kwaye ngokuphindaphindiweyo. A look quick apha, amanga lincinane, kwaye ekuhambeni kwexesha siba buthuntu besono siqalise ukuzithethelela kuyo. Kwaye phambi kokuba uyazi ukuba, siza nje sengathi, side Masingadinwa ngathi kwaye ayeke ukulandela uYesu zizonke. Abo amadabi ezincinane ngokwenene enkulu.
Ngoko ke, ukuba ulapha namhlanje kunye nokuvumela ezinye isono ukuba ahlale ebomini bakho, baphenduke! ngoku! Vuma izono zakho kwabanye. Musa ukuqala le nqubo lukhuni intliziyo yenu. Endaweni yokuthembela iindlela zakho, kwaKhe. Landela iindlela zakhe. Themba uYesu, wakholwa iLizwi laKhe. Ekuthanda wena uninike Uyalela ukuba kulunge kuwe. Landela indlela yakhe.
Kulungile, ngoko ke ingqumbo kaThixo uvutha sisono isono yokukhetha indlela enye. Ke ngoku? Yintoni iziphumo ngokukhetha le ndlela enye?
Mamela ndinyana 11.
Ngaze isifungo ngomsindo wam, "Baya kungena naphakade ekuphumleni kwam."
Imiphumela ukuba ingqumbo kaThixo, Yena uya kuwavelela. Kule imeko ethile, UThixo ebathethelela, kodwa Yena akavumeli ukuba ukungena kwiLizwe Lesithembiso. Kodwa ngexesha uMhubi ubhala le, sele abantu bakaThixo bangena. Ngoko usebenzisa esi sicatshulwa ukuthetha ekuphumleni kaThixo kanaphakade. Kwaye le yindlela umbhali yamaHebhere uzisebenzisa kakhulu. UThixo i lokuphumla obungunaphakade ukuba nako ukungena, kodwa isono sethu ungaligcina kuyo nathi.
Sibona apha ukuba nje uThixo nomsindo, kodwa yena wenza izigqibo ngomsindo wakhe. enyanisweni, kule ndima Wenza isifungo ngomsindo wakhe. Wenza kanye into enye uphindo ngaphambili uthi ukuba ukwenza. Kodwa ke umsindo wakhe ongathembekanga efana neyethu. Oku akuthethi ukuba wonke umsindo babantu enesono. Kodwa yakhe Akwenzeki. Umsindo akuthethi makakuyobe Yena kunye nesihamba ukuba benze izigqibo zobudenge. kunokuba, Ingqumbo yakhe kwinqanaba elikhokelwa, ngcwele, kwaye Nangoku aphendule ukulunga nobulungisa.
ekuphumleni kukaThixo kanaphakade elihle, nokuthula, non-lusizi, UThixo ezukisa kwindawo bonke abantu bakhe bokwenyaniso baya kuphelela. ingqumbo kaThixo engcwele, nje, oboyikisayo, isoyikisa nxi abo bafumana nto bayihlwayeleyo [reword]. Akukho kuphumla Esihogweni. Akukho kukhululeka Esihogweni, ukubandezeleka kuphela ingqumbo. Kwaye thina uthetha malunga ingqumbo womkhosi okanye indoda, kodwa ke ingqumbo kaThixo usomandla entlokweni yakho phakade. ingqumbo kaThixo ayikho kuphela kwiTestamente eNdala. Nangoku esithiyile isono namhlanje. Sifanele uloyike eli uThixo emangalisayo. isono sabo wawalela ekuphumleni kukaThixo, kwaye esingayenza nathi.
Le yenzelwe wonke apha ngobu busuku. Emva kokuba ufe, wena uya kungena ekuphumleni kukaThixo okanye banyamezele ingqumbo kaThixo. Zezo ezi meko zimbini kuphela. Sonke sifanelwe sesibini ukhetho. Ngenxa yokuba sonke Bafana sizukulwana sonayo ekhuluma. Siya endleleni yethu. Siya belahleka ezintliziyweni zethu kwaye musa ukulandela iindlela zakhe. Siye yenziwe kanye into akumkholisi uThixo yaye ngokuphindaphindiweyo.
Ngoko ke likho ithemba lokuba nayiphi na kuthi? Nantsi lapho.
e 1 kwabaseTesalonika 1:10, UPawulos uchaza umntu evela kwelaseGalili ngala mazwi, 'UNyana wakhe evela emazulwini, awamvusayo kwabafileyo, UYesu kwauYesu, osihlangulayo kuyo ingqumbo ezayo. "
Yaye kamva 5:9-10 uthi amakholwa, "Kuba uThixo akasibizelanga ngqumbo, kodwa ukuzuza usindiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu, owasifelayo, ukuze nokuba sihleli, nokuba silele, sidle ubomi kwakunye naye. "
Ithemba lethu kuphela nguYesu. Kwaye Yena uyasithanda kangaka.
"Kule uthando, ayisithi uyamthanda uThixo kodwa ikukuba wasithandayo yena, wamthuma uNyana wakhe ukuba abe sisicamagushelo sezono zethu. " 1 John 4:10
Kwakukho indebe, ngumalawul 'inqumbo ngumsindo nomsindo wayelungele kuthulula phezu kwethu uThixo. Kodwa abo kuthi kuKristu, musa kufuneka sinyamezele ukuba ingqumbo. kunokuba, UThixo uye walisebenzisa eli ndebe phezu kweentloko zethu kwaye Uyayazi bayizisa. Kuba abo bethu kuKristu, Wathatha ingqumbo ukuba agcinwe phezulu, kuphalala konke oko ikomityi enye, wasibeka phezu kwentloko uNyana wakhe kwaye Wagalela bonke kuYe. Yintoni uthando olukhulu! UYesu wanyamezela ingqumbo isoyikisa kaThixo aboni emnqamlezweni. Wafa phezu esiphambanweni, kodwa Wavuka engcwabeni lakhe kwiintsuku ezintathu kamva, uKumkani wethu noloyiso. Ke uthe uYesu, "Yiza kum, nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, yaye ndiza kukunika ukuphumla. " (Mateyu 11:28)
Iindaba ezimnandi kukuba abo banokholo kulo Yesu- UThixo akukho umsindo washiya thina. in uKristu, UThixo akamkhethi umsindo nathi. Uyayazi buhlungu kuthi xa sisona, kodwa asiyi kohlwaywa bona. Hayi, uyolo lomntu Abazono akabalwa kuye.
Yaye ukuba siqhubeka sithembele kuKristu, xa ebuya sinako wamkela ngovuyo endaweni ngesothuso. Kwaye thina ukucula, "Kwangokunjalo kakuhle umphefumlo wam."
Evan • EyoMdumba 2, 2015 ngexesha 9:41 pm • impendulo
Enkosi, uhambo. Ndandifuna ukufumana athatha wakho kwinto ethile, ngenxa yokuba uye umntu oye wadlala indima enkulu uhambo lwam kunye noKristu. Oku kuya kuba elide, ngoko ukuba azifumane ngeenxa zonke kuyo, Ndiyaqonda.
Xa waba ngumKristu iminyaka embalwa emva, izinto zilula- sithembele ngokupheleleyo uYesu, UThixo forives ukuba yonke into (elidlulileyo, khona, esizayo), sithembele nje kuye yaye uya wasala neminye. Ukuba imizwa isiseko sokholo, kodwa emva ngaloo mihla kwabakho uvuyo rhoqo kunye nokuthobela lula ukuba ndicinga waxolelwa ngaphandle kwemiqathango. Nje kid wayethembele utata wakhe yaye akazange Ungakhathazeki malunga kokufuna ukuba nigqibelele. Ujoliso bonke, ebonga uKristu. kwakungeyomfuneko naxhala isono ngenxa yokuba ngendlela azijonga ngayo- umsebenzi wam ukuthemba uYesu, uMoya oyiNgcwele abayinyamekelayo abanye.
Njengoko Ndachitha ixesha ngakumbi nangakumbi kulo igama, kwakukho izibhalo ukuba akhwele ebizinyikimisa ukuba trust / ubabalo lesiseko ukuba ochazwe ngaphambili waza wandithabatha emva ebuntwaneni bam. Utata ikakhulu (lowo oselula ukholo ngelo xesha, ngoko uze ungamenzi nenqala ngakuye) ngokukhawuleza kakhulu xi ubulungisa bukaThixo ngaphandle kokuza ngayo ukufundisa ngayo inceba yakhe. Umzekelo, Wandiyala ke eselula kakhulu ukuba kufuneka baguquke kuzo zonke izono zam ukuze basindiswe, ukuba amaKristu amaninzi aya uzakubakho ngenyhek 'etyeni ngeMini Yomgwebo, kuba becinga ukuba uYesu uza sibamkele xa kunjalo saphule umthetho kaThixo, etc. Waba omkhulu nokuthetha tounges, Zininzi nezinye izinto kodwa ayizange icha- kakhulu kwi uyamthemba uThixo inxalenye.
Njengoko amathandabuzo ngakumbi nangakumbi kuvele yaye baba nomdla kakhulu yenkolo, kwenye indawo ecaleni komgca I wamisela umzekelo ngokuzama ukuthatha izinto amandla am owuvayo yonke phandle ngengqondo kunokuba basondele nokulindela kuThixo. Andikwazi ndithi kuni, zingaphi iiyure Ndakhe wachitha ephanda izinto zenkolo, imibuzo engenampendulo, wakhangela phezulu imibhalo in Greek, etc. kwi internet kulo nyaka uphelileyo. ebecinga My iye “Kakuhle ukuba uYesu zonke ezi meko, ngoko ke kufuneka uqinisekise ukuba sidibana iimeko.” Ngaloo ndlela, ukuhamba bam baba ngokwasengqondweni kwaye perfectionistic. Yintoni kanye elula kangangokuba waba phantsi nzima, ithemba lam bekhubazekile, yaye ngaloo ndlela ndiseyilaa ngexesha yantle saxineka kuhambo lwam kunye noKristu ngoku.
Ndiphawula ndingamaqela amabini aphikisanayo engalungelelananga ngaphakathi ubuKristu yaye ndiqinisekile nawe uyavumelana- 1) i “yokulalela” intente kunye 2) UYesu walihlawula lonke” eminqubeni. Le nkampu ukuthobela uyakhawuleza xi uxanduva lwethu kwaye kudla liveza zeVangeli yababhali, ukwambula, i OT, etc. I UYesu wahlawula yonke ntshikilelo inkampu ngokumthemba yedwa kwaye kubonakala ukuba uxhomekeke kakhulu kakhulu kwi Paul. Xa eqala ukuhamba noKristu, I babenomoya wabadlali Camp 2, kodwa okukhona ndifunda iZibhalo (ngelishwa, izimvo zabantu kwi-intanethi) Ndaba lebandla kakhulu malunga bengaqondi nokuqonda yam yobabalo batshintsha ubomi bam. Camp 1 kukhulu malunga khangela ubulungisa, akatshintshi bukaThixo uhlobo kodwa kubonakala ukuzama ukuvelisa ukulalela okuzimisela yenyama. Baya ireferensi izinto ezifana “Nkosi, Nkosi… Andizanga ndinazi” embhalweni. Camp 2 kukhulu malunga khangela ukuxolelwa nguThixo aza kwelanga kunye umnyama izinto, kodwa ithi uThixo ngokungathi yena abantu ezahlukeneyo ngokupheleleyo ezimbini ukusuka OT ukuya NT. Baya ireferensi ukuba akukho esiya kuba nako ukusahlula nothando lukaThixo kwaye hlobo izinto. inyaniso kaThixo kufuneka ibe kwindawo ethile phakathi elungeleleneyo, kunene? Injongo yam nje ukwazi uThixo ngubani Uthi yena ube ebhayibhileni ukuqonda ukulungelelana zonke iimpawu zakhe. Zingandihambeli ixesha enzima ekubuyeleni nje ngokumthemba kwaye ukuba nolwalamano naye kuba mna Ndikhathazekile njalo “ukungabinako ukuze sibone yonke into” (Ndiza ethembele ngolwazi yam kakhulu). Inye kuphela ukuba Kuyasithuthuzela ngoku lo- Xa sibuyela ehamba kunye nokuthetha noThixo, ukuthemba ukuba uza kuthatha le nto naphi na kufuneka athathe ukuba ndiya kukholosa nje ukuba enze oko. Ukuba inazo zonke ezi meko, ke umsebenzi wam ukuthemba ukuba ubabalo lwakhe uya kundinceda kubakhawulela.
Uthando oluninzi, uhambo.
Liz • EyeThupha 10, 2016 ngexesha 8:52 mna • impendulo
Ndabona angst yakho, kwaye unelungelo. Kukho ngokusisiseko kwiinkampu ezimbini xa ujonge lo mfanekiso enkulu. Kukho ukulinganisela nakuba, kwaye ndiyazi ukuba unako ukufumana khona. Mna ndithi ukufumana kunokuba ukufumana kuba uYehova usixelela, “nkqonkqozani kwaye uya kuvulelwa”. Ukufundisisa iLizwi ilungile, musa ukuyeka. kodwa, nani ngomthandazo? Andithethi malunga ethandaza imvakalelo isinyanzelo okanye derhu izicelo. kodwa, ukuthandaza ngokwenene kusuka entliziyweni yakho. Yinto lokuziqhelanisa, Ndiye ndizame ukufunda indlela yokwenza ngcono ngokwam muva. Ekuqaleni, masimdumise uThixo ngenxa ungubani na. Emva koko ucele uxolo, ukuxolela ethile. Emva abasondelayo itrone nezinto zakho, ezikhathazayo kunye imithwalo. Phinda up ngokudumisa ngaphezulu. Kukho ezinye zokusebenza ezinkulu phaya ukunceda ngale (Examen and Hlola). Zombini ezi umthandazo apps ukuba umhlobo wam lubonisa kakhulu. Andigqithanga isigqibo yeyiphi ukwenza kodwa. Ndandikhe siphakamisa ukufunda incwadi, oqotho, yi Priscilla Shirer. Mna ukuyifunda ngoku. Imalunga umthandazo imfazwe yokomoya kwaye its been mkhulu kangaka! Ngokwenene iliso lokuvula. Mna ndicinga ngakumbi nangakumbi ukuba kuluntu Koloni balele ngokomoya. Sinento indlela yesiqhelo ukuya umthandazo kunye imfazwe yokomoya ngumntu wasentsomini – kodwa ke bonke ngokoqobo. Uya kufumana uxolo ngomthandazo – ukuthetha noThixo imibuzo yakho. Kulungile ukuba ukubuza imibuzo. Ndiyathemba ukuba ukwazi ukubona oku kwaye ndiyathemba kukusiza Evan!
Dade lwakho kuKristu,
uJimmy hayes ijezi • EyeNkanga 24, 2015 ngexesha 12:42 pm • impendulo
Keenan Allen Jersey • EtiMnga 12, 2015 ngexesha 12:17 pm • impendulo
Kukho iweb eninzi obon- ukusuka yevoli yangaphakathi kunye nangaphandle ball beach. Eyona nto inzima lokufumana luncedo ukuba nguwe kanye udlulele ungasithumela i actual batyumkileyo amatye ekalika. Indlela kwendlu ithatha nje 3 inyathelo ndlela apho uqale ngqo kunokuba ukuya phambili njengoko enyukile.